Muchidzidzo chino, tichaona mavara muChirungu. Muchinyorwa chedu chinonzi mavara echiRungu, tichaona ese mazita echiRungu mavara uye toita mitsara yemavara muChirungu. Tichaitawo maexercises pamusoro pemavara muChirungu.
Maverengero Nekunyora Mavara muChirungu
Dzidza chirungu Zvakakosha kutevera imwe nzira. Tinofanira kutaura mashoko achaita kuti udzidze mutauro uyu zviri nyore, uyewo maumbirwo emitsara nemitemo yegirama. Panguva ino, unogona kutanga nekudzidza Chirungu mavara.
Navy Blue: Gungwa rebhuruu
zvinonyanya kuzivikanwa Chirungu chiperengo chemavara ndizvo zvazviri. Zvino ngatitarisei mataurirwo azvo!
Navy Blue: Neyvi Blu
Nekuda kweizvozvo, unokwanisa kutaura mavara muChirungu sepamusoro. Zvino ngatishandise mavara echiRungu mumutsara kuti iwe unzwisise zvirinani!
Ndapenda imba chena. (Ini ndaipenda imba chena.)
Ndinoda kupfeka zvangu tsvuku (Ndinoda kupfeka rokwe rangu dzvuku.)
Girinhi ndizvo zvandinofarira ruvara. (Green ndiyo ruvara rwandinofarira.)
Ndinofarira kupfeka zvangu bhuruu (Ndinoda kupfeka bhurugwa rangu reblue.)
maziso angu ari shava. (Maziso angu ane brown.)
Vashandi vanopfeka orenji (Vashandi vanopfeka mavheti eorenji.)
Ruzhinji rwemavara anodiwa nemusikana nde pepuru. (Vasikana vazhinji vanofarira ruvara rwepepuru.)
Ndinoda kuva ne nhema (Ndinoda kuva nemotokari nhema.)
Gireyi mbatya ndidzo dzandinofarira nguva dzose. (Zvipfeko zvegrey zvinogara zvandinofarira.)
Zvaunoda Kuziva NezveMavara muChirungu
Chirungu mavara Nekuda kweizvi, kudzidza mutauro uyu kuchanyanya kunakidza! Zvinoenda pasina kutaura kuti mavara akakosha sei kune nyika yedu! Colors; Ndicho chimwe chezvikuru zvinokurudzira. Tinofanira kutaura kuti mavara akakosha mukukurukurirana, kuwedzera manzwiro, kupa mharidzo nezvimwe zvakawanda. Mukuwedzera, zvinofanira kutaurwa kuti vana, kunyanya avo vachangotanga kudzidza Chirungu, vanodzidza nezvemavara ane chido chikuru. Kana iwe ukadzidza Chirungu chemavara aunoshandisa mune yega yega yehupenyu hwako hwezuva nezuva, iwe unozotanga kudzidza mutauro uyu kubva kunzvimbo iri nyore uye inonakidza kwazvo. Chirungu mavara; Izvo zvakakosha zvakanyanya maererano nekuwedzera mazwi ako uye kuwedzera kukurudzira kwako kudzidza.
Chirungu mavara Usati waenderera kune izvo zvaunoda kuziva nezvazvo, iwe unofanirwa kutarisa nzvimbo yako yekugara! Iwe unozoona kuvepo kwerumwe ruvara kwese kwese! Zvisinei, mangani emavara aya aunoziva muChirungu? Kunyanya kana uchangotanga kudzidza Chirungu, unofanirwa kuita kuti basa iri rive nyore nekudzidza Chirungu chemavara ari pamusoro.
ruvara uye ruvara Vanhu vazhinji vanoshamisika kuti musiyano uripo pakati pemashoko ndeupi. Zvisinei, tinofanira kutaura kuti mashoko ose ari maviri anoreva chinhu chimwe chete. Runyoro rwekunyora kana ruvara rwakakosha pakuona kuti Chirungu chenyika ipi chinoshandiswa. ruvara; NdeyeAmerican English. Mune mamwe mazwi, inoshandiswa muUnited States. Colour ishoko reBritish English. Tinofanira kutaura kuti inoshandiswa munyika dzakadai seNew Zealand neAustralia, kunyanya England. Mukuwedzera, grey inoreva ruvara rwegrey; Kunyangwe iri izwi reBritish English, grey ndeyeAmerican English.
Tsvuku, bhuruu uye yero; mavara ekutanga vanozivikanwa sa Nemamwe mashoko, tinofanira kutaura kuti mavara ose anooneka ane mavara matatu aya. Somugumisiro wekusanganisa mavara matatu aya muzvikamu zvakasiyana, mavara epakati anobuda. primary colours in english mavara ekutanga uku achitumidza mavara epakati mavara echipiri inonzi.
Tsvuku uye yero Rudzi rweorenji (orenji) rinobuda kubva mukubatanidzwa kwe (tsvuku uye yero). Orenji; ruvara rwepakati.
Bhuruu uye yero Kubatanidzwa kwe (blue neyero) kunoburitsa ruvara rwegirinhi. Girinhi; inokwezva kutarisa seruvara rwepakati rwakasiyana.
Tsvuku nebhuruu Kubva pakusanganiswa kwe (tsvuku uye bhuruu) ruvara rwepepuru runobuda. Pepuru; Imwe ruvara rwepakati.
Mukuwedzera kune izvi zvose, mune dzimwe nguva, iwe unogona kunge usina chokwadi kuti ungaziva sei ruvara. Mune mamwe mazwi, kunyange ruvara rwaunoona rungaita seruvara rwekutanga kana rwechipiri, harisi rerudzi irworwo. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iyo -ish suffix inodiwa. TsvukuPanogona kunge paine mavara akasiyana ekushandiswa akadai seyero, brownish. Tichatsanangura nyaya iyi nemienzaniso kuti iwe ugoinzwisisa zviri nani!
Ane bhegi dzvuku. (Ane bhegi dzvuku.)
Tarisa ma t-shirt eorange aya. Akaitenga kupi? (Tarisa tee orange iro! Akariwanepi?)
Uye zvakare, sezvakangoita muTurkey, unogona kuunza chiedza kana rima zvirevo pamberi pavo kuti utsanangure zvirinani mavara muChirungu. Unogona kuita tsananguro dzakanyatsojeka dzemavara nemashandisirwo akadai serima rebhuruu (rima rebhuruu), rakatsvuka (brown). Pamusoro pe, mavara akajeka Unogonawo kushandisa chirevo chakajeka.
Pamwe nekudzidza mavara, iwe unofanirwa kudzidza kubvunza ruvara rwechero chinhu muChirungu. Panguva ino, tinogona kutaura kuti mitsara inotevera ichauya inobatsira!
Ruvara rudzii urwu? (Uyu ndeupi ruvara?)
Nderipi ruvara rwaunoda? (Ndeupi ruvara rwaunoda?)
Iwe une mavara akasiyana eizvi here? (Une izvi mumavara akasiyana here?)
Ine tsvuku here? (Izvi zvine tsvuku here?)
Ndinoda mbatya dzeblue
Tine mavara akasiyana. Unoda kuvatarisa here? (Tinewo mavara akasiyana. Unoda kuvatarisa?)
Nekuda kweizvozvo, iwe unozonzwa kureruka paunenge uchidzidza Chirungu mavara nemitsara iri pamusoro. Kana iwe ukadzidza maitiro akadaro, mavara achave asingagumi. Mukuwedzera, iwe unofanirwa kuwana rubatsiro kubva kune avo vakakukomberedza iwe uchidzidza Chirungu mavara. Kunyanya, iwe unofanirwa kutarisa mavara ari munzvimbo yako yekugara nekupa chirevo. Kana iwe ukaona ruvara rwezvese ruzivo rwunouya nenzira yako uye wowana chiRungu chakaenzana mushure, iwe unozodzidza iwo echiRungu akaenzana emarudzi ese mushure mechinguva.
Chirungu mavara; Zviri nyore uye zvinonakidza. Nekuda kwemavara, une mukana wekuzviratidza nenzira iri nani kana uchitaura Chirungu. Mukuwedzera, online Chirungu mavara Tinofanira kuwedzera kuti pane zvakawanda zvekushandisa zviripo zvekukubatsira kudzidzira.
Exercises paMavara muChirungu
Cheese iri ....
Orange ndeye ....
Bhachi rake nde….
Pazasi iwe unogona kuwana mhinduro kune blanks pamusoro.
Kana iwe ukagadzirisa muedzo uri pasi apa, iwe uchava nekunzwisisa kwakanakisisa kwemavara.
Chii chinonzi primary color?
Ndeupi usiri wekutanga ruvara?
Paunosanganisa tsvuku neyero, unowana ....
Paunosanganisa bhuruu nechitsvuku, unowana ....
Paunosanganisa yero neblue, unowana….
Paunosanganisa nhema nechena, unowana ....
Paunosanganisa chena uye tsvuku, unowana….
Unogona kuenzanisa mhinduro dzako nemhinduro dziri pasi apa.
Chirungu mavara uye zvakafanana neTurkey zvichave zvakakosha kwauri!
Mibvunzo Yemuenzaniso paMavara muChirungu
Tafura ine ruvara rwakadini? (bhurawuni)
Tafura ine brown
Katsi nhema here kana kuti shava? (nhema)
Idzo katsi nhema
Ndeapi mavara madziro? (chena)
Marozi matsvuku here kana machena? (kurambwa)
Denga rine ruvara rwakadini? (bhuruu)
Unogona kuwanza mienzaniso iri pamusoro! Kutenda kune iyi mienzaniso, zvichave nyore kwauri kuti unzwisise mavara muChirungu.
Shamwari dzinodikanwa; tinofanira kutaura kuti pfungwa yekudzidza mutauro mutsva inogamuchirwa nemunhu wese. Tinofanira kutaura kuti ine zvakanakira sekusangana nevanhu vatsva, kutaurirana nenzira iri nani, kunzwisisa tsika dzakasiyana zvakadzama, uye kutarisa nyika nemaonero akasiyana zvachose. Mukuwedzera, kana ukadzidza mutauro wakasiyana, uchava nomukana wokuva muteereri akanaka zvikuru. Zvidzidzo zvakaratidza kuti vanhu vanogona kutaura mitauro inopfuura mumwechete vane pfungwa dzinoshanda uye dzekugadzira.
Kana uchinzwa usingakodzeri kudzidza mutauro mutsva, unofanira kubvisa pfungwa iyi nokukurumidza sezvinobvira. Iwe uchanzwa uine rombo rakanaka kana iwe ukaisa moyo wako pane iyi maitiro, ayo anofinha, anonetsa uye anototora nguva yakawanda kupfuura iwe yaunofunga, kubva pakutanga. Zvinozivikanwa kuti mitauro 6 inotaurwa munyika. Pakati pemitauro yakawanda kuedza kudzidza chirungu isarudzo. Horaiti, Dzidza chirungu Nei zvichikosha kudaro?
Zvikonzero Zvekudzidza Chirungu!
Chirungu; Sezvaunogona kufungidzira, ndiwo mutauro unozivikanwa zvikuru munyika yose. Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vachisimbisa chiSpanish panyaya iyi, tinogona kutaura kuti kutonga kweChirungu kwakakura zvikuru. Zvinofungidzirwa kuti munhu mumwe chete pavanhu vashanu munyika yose anotaura Chirungu. Pamusoro pezvo, hazvifanirwe kufuratirwa kuti kune vanogona kunzwisisa pamwe chete nevanogona kutaura Chirungu. Nekuda kweizvozvo, tinogona kutaura kuti zvisinei nekwavanogara munyika, vanhu vanodzidza Chirungu semutauro wechipiri wekune imwe nyika mushure merurimi rwaamai. Nemamwe mashoko, Dzidza chirungu; Ichava imwe yesarudzo dzakanakisa dzauchaita muhupenyu hwako.
Basa riri nani uye muhoro mumamiriro ehupfumi anhasi; Hapana mubvunzo kuti chiroto chemunhu wese. Tinogona kutaura kuti makambani anove epasi rese, zvisinei nekuti ari madiki, epakati kana makuru. Panguva ino, kuti ndishande mune imwe kambani yenyika, ini chekutanga Chirungu unofanira kudzidza. Zvisinei nekuti unogara kuChina kana Germany, unogona kuwana mukana wekushandira chero kambani yepasirese pasirese neruzivo rwako rwemutauro weChirungu. Mukuwedzera, iwe unofanirwa kuziva Chirungu kuti uwane muhoro wakanaka! Ukatarisa avo vanoshanda mumakambani akaita seGoogle, Facebook, Apple, uko munhu wese anoda kushanda, unoona kuti ruzivo rwavo rweChirungu rwakakwana mune zvese.
Takati Chirungu mutauro unotaurwa munyika dzakawanda pasi rose. Kutaura zvazviri, tinogona kutaura kuti kubvira nhasi, nyika 57 dzine mitauro yepamutemo. Nemamwe mashoko, rinoshandiswa semutauro wepamutemo munyika dzinopfuura chikamu chimwe muzvina chenyika. Ichi chega ndicho chikonzero chine musoro chekudzidza Chirungu!
Paunofunga nezvenyika yebhizimisi, chinhu chokutanga chaunofunga nezvazvo Chirungu Zvakajairika! Nokuti Chirungu; Ndiwo mutauro wepasi rose wepasi rose webhizinesi. Kana iwe ukadzidza Chirungu, chinozivikanwa semutauro wesoftware, sainzi, ndege, hukama hwepasirese, kushanya uye midhiya, uchave nemukana wekuwana basa nemikana inoyevedza mumakambani emarudzi akawanda. Kunze kwezvo, tinofanira kutaura kuti Chirungu ndiwo mutauro wekutengeserana nedzimwe nyika. Masangano mazhinji akazvimirira, kusanganisira United Nations, anotambira Chirungu semutauro unonyanya kushandiswa.
Tinofanira kutaura chimwe chimiro cheChirungu chisingatarisirwi nevanhu vazhinji. Inenge 80 muzana yezvidzidzo zvepasirose zvepasi rose uye mapepa ekutsvagisa Chirungu zvakanyorwa kuti. Kuti vashambadzire mapurojekiti avo uye kuti vanyatsoita zvidzidzo zvedzidzo, kunyanya kumayunivhesiti ane mukurumbira pasi rose muUSA, kudzidza mutauro wechiRungu kunoshanda muzvidzidzo kwakakosha.
Chirungu Haufanire kufunga nezvekudzidza chete maererano nedzidzo nebasa. Kana iwe ukadzidza mutauro uyu nenzira yakanyanya kunaka, uchave nemukana mune zvakawanda zvinhu paunenge uchifamba. Chero nyika ipi munyika yaunoenda Chirungu Unogona kusangana nemunhu anotaura. Kana iwe ukaenda kune imwe nyika kune dzidzo kana chimwe chikonzero, iwe unofanirwa kudzidza Chirungu kuitira kuti uve nenguva yakasununguka uye kutaura nevamwe.
Chirungu; Ndiwo zvakare mutauro wenhepfenyuro. Zviri mukati menhepfenyuro dzenhau huru dzepasi rose dzakaita seterevhizheni, magazini, mapepanhau, redhiyo zvakaburitswa neChirungu kubva kare. Pamusoro peindastiri yemafirimu nemimhanzi yeAmerica, tinofanira kutaura kuti mapepanhau enhau eBritain anewo sarudzo panyaya iyi. Nekuda kweizvozvo, iwe unofanirwa kuziva Chirungu kuti utarise ekunze akateedzana nemabhaisikopo kana kutevera nhau. Kana iwe ukadzidza Chirungu, mutauro wenhau dzepasirese uye hunyanzvi, unogona kunakidzwa nemhando dzese dzezviwanikwa pasina kudiwa kwekushandura.
Chirungu; Ndiwo mutauro wepa internet pamwe nemutauro wenhepfenyuro. Mawebhusaiti mazhinji pasi rose ari muChirungu. Kune mawebhusaiti akawanda echiRungu pazvidzidzo zvakaita sedzidzo, bhizinesi uye hutano. Pamusoro pezvo, isu tinofanirwa kutaura kuti masaiti aunoshanyira kuti utarise internet uye kushandisa nguva ari muChirungu. Panguva ino, kana iwe uchida kubatsirwa neinternet zana muzana, unofanirwa kudzidza Chirungu.
Kukosha kwekudzidza Chirungu Inozviratidza pachayo zvakanyanya mumunda wedzidzo. Mutauro wepamutemo wedzidzo Chirungu munyika dzakawanda muAsia neEurope, pamwe neAmerica neEngland. Kana iwe ukataura Chirungu, uchave nekuwana hupfumi hwemikana yezvidzidzo kunze kwenyika.
The English; Ndiwo zvakare mutauro wezvinyorwa. Kuverenga mabasa akanyorwa nevanyori vane mukurumbira pasi rose Chirungu Zvakakosha kuti uzive. Kuti unzwisise zvakanyanya rugwaro, zvakakosha kuti uverenge mumutauro waro wepakutanga. Panguva ino, kana ukagona Chirungu, uchave nemukana wekuverenga nekunzwisisa mabasa akadai nenzira yakanaka.
Tinofanira kutaura kuti Chirungu chinoshandawo mukukura kwepfungwa. Kunyanya, kana ukadzidza mutauro uyu, ndangariro yako ichava nani. Kana iwe uine mitauro miviri, uropi hwako huchange hwakabatikana nguva dzese. Mune mamwe mazwi, ichi chinhu chinoratidza kuti ndangariro yako iri kuwedzera kusimba. Uye zvakare, Dzidza chirungu; Inobatsirawo pakudzidza mutauro wechipiri wekune imwe nyika. Zvinoenderana netsvakiridzo, isu tinofanirawo kutaura kuti Chirungu chichabatsira kuti uropi hwako huzvidzivirire paunenge uchikura.
Mukupedzisa, nekuda kwezvikonzero zvese izvi, iwe unofanirwa kudzidza Chirungu pasina kupokana mupfungwa dzako. dzidza mutauro uyu; Ichakubetsera munzira dzakawanda uye ichave yakakoshawo maererano nekuzvivimba kwako. Paunenge uchidzidza Chirungu, uchaona kuti miniti yega yega yaunopedza kudzidza mutauro uyu yakakosha. Kana iwe ukagona mutauro uyu, iwe unozowana bhenefiti yakakosha maererano nekukwana kwakakodzera iwe.
Nzira dzekudzidza Chirungu
dzidza mavara muchirungu Zviri muropa kuti unoida! Kana iwe ukadzidza mavara, chiri chidzidzo chakareruka zvakanyanya, nenzira yakanakisa, iwe uchaona kuti ruzivo urwu ruchabatsira zvakanyanya kunyanya muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Nekudaro, kune zvakare akasiyana mapoinzi aunofanirwa kutarisisa paunenge uchienda kumberi parwendo rwako rweChirungu, rwawakatanga nemavara. Mune mamwe mazwi, kana iwe uchida kufambira mberi uchidzidza Chirungu, unofanirwa kushanda nenzira yakarongwa uye yakarongeka. Panguva ino, tinofunga kuti mazano anotevera achauya anobatsira!
dzidza mavara muchirungu Kana uchida, unofanira kutanga wazvikurudzira. Panguva ino, chinangwa chauchaisa chichava kukurudzira kwakakosha kwauri. Mushure mekuisa simba rakakwana mukukurudzira, iwe unofanirwawo kuona yako nhanho yeruzivo rweChirungu. Nemamwe mashoko, unofanira kuona kuti uri padanho ripi. Iwe unogona kunge uri padanho rekutanga kana padanho repakati. Kune nzira dzakasiyana dzekudzidza padanho rega rega.
kudzidza chirungu Iwe unofanirwa kufunga nezvekuita nhanho nhanho. Unogona kuva nyanzvi pagirama. Zvisinei, zvakajairika chaizvo kuva nezvikanganiso pakutaura nekuteerera. Panguva ino, iwe unofanirwa kutanga waona chirongwa chebasa chekushomeka kwako. Uye zvakare, iwe unofanirwa kutaura kuti kuverenga, kunyora, kuteerera uye kutaura hunyanzvi huchabatsira zvakanyanya iwe kuti udzidze Chirungu mumashoko chaiwo.
Makore mangani aunotanga kudzidza Chirungu akakoshawo zvakanyanya! Zvidzidzo zvakaratidza kuti kudzidza mutauro kunofanirwa kutanga vachiri vadiki. Zvisinei, kudzidza mavara muchirungu Hauna kunyanyononoka pazviri. Unogona kutanga kudzidza Chirungu chero zera. Nekuti, nzira dzakasiyana dzedzidzo dzinoshandiswa pazera rega rega. Tinogona kutaura kuti kune dzidzo yevana umo nzira dzakawanda dzechisikigo uye misiyano yemafungiro inoenderana nezera inorangarirwa. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti dzidzo yakazara inoshandisirwa mukuyaruka uye gare gare nguva. Kunyangwe ukanonoka kudzidza Chirungu, haufanirwe kurasikirwa nekukurudzira kwako. Uropi hwevanhu; Yakagadzirirwa kudzidza mitauro chero zera. Nekuda kwenzira dzakakodzera dzekudzidzisa, unogona kuwana mukana wekudzidza kunyangwe zvinhu zvaunofunga kuti haugone kudzidza.
Kwaunodzidza Chirungu kwakakoshawo! Panguva iyi, vanhu vakawanda kudzidza chirungu Tinogona kutaura kuti ane matambudziko nazvo. Kana uchida, unogona kudzidza mutauro uyu munyaradzo yeimba yako. Nekuda kwekuvandudzwa kwehunyanzvi Dzidza chirungu Iwe une zvakawanda zvingasarudzwa zvezita rako. Iwe unogona kudzidza Chirungu chero nguva uye chero kwaunoda, nekuda kwekudzidziswa kwepamhepo kwauchagamuchira painternet. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuchinjisa dzidzo yeChirungu kuhupenyu hwezuva nezuva. Nemamwe mashoko, unofanira kuongorora zvawadzidza nenzira inoshanda kwete dzidziso. Panyaya iyi, tinogona kupa muenzaniso wemavara echiChirungu, iyo ndiyo nyaya yechinyorwa chedu. Tinofanira kutaura kuti chinhu chimwe nechimwe chiri munharaunda yako chine ruvara rumwechete. Panguva ino, tinogona kutaura kuti mavara achave asingagumi mupfungwa dzako kana iwe ukadzidza zvinyorwa zveChirungu zvemavara ezvinhu zviri pedyo.
Sezvatakambotaura, panguva yedzidzo yako yeChirungu, zvakakosha zvakanyanya kuti uri padanho ripi! Tinofanira kutaura kuti kune matanho matanhatu akasiyana maererano neCommon European Framework of Reference for Languages. A1 Kutanga ve A1 Elementary Level; inoreva mwero wokugona kunyorwa nokutaurwa zviri nyore zveupenyu hwezuva nezuva. Kune mazinga akasiyana: B1 Yepakati, B2 Yepamusoro Yepakati, C1 Yepamusoro, C2 Nyanzvi. Panguva ino, zvinofanirwa kutaurwa kuti kana uchangotanga kudzidza Chirungu, A1 uye A2 mazinga akakodzera iwe. Nekudaro, kana iwe ukatevera matanho akakodzera, unogona kufambira mberi kusvika kumatanho epamusoro pasina nguva.
Pakupedzisira, Chirungu mavara Isu tinofanirwa kutaura kuti izwi rekuti nzira yekurangarira yakakukodzera iwe mudzidzo yeChirungu, kunyanya muChirungu.
# Maverengero Nekunyora Mavara muChirungu
# Zvaunoda Kuziva NezveMavara muChirungu
# Exercises paMavara muChirungu
# Mibvunzo Yemuenzaniso paMavara muChirungu
# Zvikonzero Zvekudzidza Chirungu!
# Nzira dzekudzidza Chirungu
Tags: 10 kirasi Chirungu mavara, 9 kirasi Chirungu mavara, mavara muchirungu